musha/HBOT - Hyperbaric Oxygen Therapy
HBOT Makomborero / Mamwe Matambudziko
HBOT inosanganisira kufema 100% oksijeni mumudziyo unomanikidzwa (Hyperbaric Oxygen Chamber). Hyperbaric Oxygen Therapy inonyatsogadziriswa kurapwa kwekudzivirirwa kwechirwere kubva kune scuba Diving ngozi.
Mune Hyperbaric Chamber, mhepo inomanikidzwa inowedzera kusvika yakakura kudarika simba remukati uye murwere anopfurikidza Oxygen kuburikidza nemasikisi kana hood system. Munharaunda iyi mapapu ako anokwanisa kuwedzera oksijeni akawanda pane zvaigona kunge zvichifemera okisijeni yakachena pane zvinowanzoitika mumhepo.
Sezvo ropa rinotakura huwandu hunowedzera hweO2 (Oxygen) kuburikidza nemuviri wako, Oxygen yakawedzera inobatsira mukurapa kwezviratidzo zvinotenderwa.